Ukudityaniswa okunokwenzeka kweMediaset kunye nenkampani yabazali bayo | Ezezimali
Esinye sezona sitokisi zishushu kwii-equity zaseSpain kwezi ntsuku ngokungathandabuzekiyo yi-Mediaset. Ukuza kuthi ga ngoku ukuba iKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoKhuseleko (CNMV) ithathe isigqibo sokumisa udweliso lweMediaset España emva kokuba iBloomberg ipapashe ukuba umzali wase-Itali weqela uzakufunda iindlela ezahlukeneyo kwinkxaso-mali yaseSpain. Amarhe acebisa ukuba a ukudityaniswa okulandelayo kunye nematriki. Eli ibiludaba ebelisasazwa ngomlomo phakathi kwabatyali zimali abancinci nabaphakathi kwaye oko kuye kwaqinisekiswa kwiveki ephelileyo.
Ngale ndlela, kufuneka ikhunjulwe ukuba iMedaset España Inkunzi iyonke iyonke i-2.263 yezigidi zeerandi kwi-Ibex 35, ke le ntshukumo iya kuba neendleko ezimalunga ne-1.200 yezigidi zeerandi. Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba amasheya athengisa ngokudropha okwenze ukuba babe yingozi kakhulu kunye nomdla wokwenza imisebenzi eqhutywa ngeli xabiso lemarike libe yinzuzo. Akumangalisi ukuba ulungelelwaniso lwendlela yalo lwalusezantsi kwixesha elifutshane neliphakathi. Ngayo yonke imingcipheko echaphazelekayo kwiintshukumo ezithathiweyo ukusukela ngoku.
Ngayiphi na imeko, i-Mediaset yayingeyiyo enye yezokhuseleko ezithandwayo kubalamli bezemali. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, ukhetho lwalukwimo ye thengisa izabelo zakho ngaphezulu kwezinye iintlobo zezicwangciso zotyalo-mali. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Kwelinye lawona macandelo aneengxaki kwimarike yemasheya ngalo mzuzu kwaye enze kakubi kunawo onke amanye kwiimarike zezabelo, kuzwelonke nakwamanye amazwe.
1 Mediaset: imeko yezabelo zakho
2 Isivuno se-10%
3 Isitshixo kukugqitha kwi-euro ezingama-7
4 Icandelo elinika amathandabuzo amaninzi
5 Ukutshintsha okucacileyo
Mediaset: imeko yezabelo zakho
Akunakutshiwo ukuba yeyona nto ibalaseleyo. Kuba, ngenene, ayinakulityalwa ukuba iMediaset España ibonisa ukuhla okungena kumvuzo Sele iqokelele iikota ezintathu zilandelelana. Ngale ndlela, ukudityaniswa kwamacandelo kunokuba nesisombululo kule ntshukumo yequmrhu eya kuqhutywa ikakhulu ukuqinisa imixholo yayo. Ngokufunyanwa kwezabelo ezitsha kwamanye amacandelo kweli qela lonxibelelwano. Ngale ndlela, iya kuba sengqiqweni kwaye inokuxhamlisa umdla wabatyali zimali abancinci nabaphakathi.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba eli xabiso likhethekileyo kwiimarike ze-equity linento ethile yokujikeleza. Oko kukuthi, iziphatha ngcono kwi Imijikelezo yeshishini eyandisiweyo, ngelixa lamaxesha aphindaphindiweyo inentsebenzo embi kunakwimakethi yentengiso eseleyo. Umahluko ekufuneka uthathelwe ingqalelo ubanzi kakhulu kwaye umahluko apho amawaka kunye namawaka eeuros adlalwayo. Yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo xa uthatha izikhundla kwesi sicelo sinikezelwa sisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35.
Enye into ebonakalayo kwiMediaset kukuba lixabiso lentengiso yesitokhwe elinikezela esona sabelo sabelo sabelo. Ngenzuzo engatshintshiyo nonyaka malunga ne-10% kwaye amanye amaxabiso kwimarike yaseSpain angafiki kuwo, nkqu neenkampani zombane. Sesinye sezona zikhuthazo zibalaseleyo zokuthatha isikhundla kule stock ngenxa yembuyekezo ephezulu ayibonisayo kulondolozo olunikiweyo. Apho kutyalo-mali oluphakathi lwe-100.000 euro, imbuyekezo ekulondolozweni malunga ne-10.000 euro inokufezekiswa. Okanye yintoni enye efanayo, isicwangciso sokwenza ipotifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo.
Oku kuthetha ukuba zonke iingeniso zenkampani ziya kubatyali mali. Nangona ngononophelo ekufuneka ethathiwe kolu hlobo lwezindululo zotyalo mali olunoburhalarhume kuzo zonke iimbono. Apho ukungazinzi kuqwalaselwa njengenye yezona ziqhelo zazo ezifanelekileyo nakweyiphi na imeko ngaphezulu kwamanye amaxabiso ezabelo zamashishini zaseSpain. Akumangalisi ukuba ixabiso elilandelayo elinikezela ngesivuno esingcono sombane Endesa ngomvuzo osondele kwi-7%.
Isitshixo kukugqitha kwi-euro ezingama-7
Ngayiphi na imeko, eyona nto iphambili ekuphuhliseni isicwangciso sokungena esinqabileyo lixabiso lezabelo zalo ukoyisa ukuxhathisa okwangoku kumanqanaba ee-7 ze-euro ngesabelo ngasinye. Kuyinyani ukuba okwangoku kusondele kakhulu kule njongo, kodwa ngenxa yokuguquguquka kwayo okuphezulu, nantoni na enokwenzeka. Nokuba iya emazantsi esitishi sayo se-bearish kwaye ingakuthatha Ukuthengisa nge-5,50 euro. Oko kukuthi, ungaphulukana nemali eninzi ukuba uvula izikhundla kwangoko. Ke ngoko, eyona nto unokuyenza ukusukela ngoku ukuya phambili kukulinda kwaye ubone ukuba yintoni ukuvela kwayo kwiimarike zezemali.
Lolunye lwezokhuseleko oluthe lwasebenza gwenxa kwezi nyanga zilishumi elinambini zidlulileyo kwaye kunokuthiwa khange kubekho nzuzo kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Hayi kangako nangona i okulindelweyo ababekumisile uninzi lwazo ekuqaleni konyaka. Ayililo ixabiso elifanelekileyo ukuba ube kwipotifoliyo yotyalo mali. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuyinqweneleka ngakumbi ukwenza imisebenzi ethile ngakumbi ixesha elifutshane kakhulu. Ngaphandle kwesivuno sayo sesahlulo esiphakamileyo.
Icandelo elinika amathandabuzo amaninzi
Okunye ukuthandabuza ukuba iiarhente ezahlukeneyo zentengiso yesitokhwe kukuba iMediaset ikwicandelo lemarike yemasheya ebangela ukuthandabuza okuninzi. Njengaleyo ikumabonwakude kuba sele imile phambi kwe ukubonakala kweendlela ezintsha kunye nenyani yokuba ilahlekelwe ngabaphulaphuli phakathi komncinci. Icandelo elikhetha ezinye iindlela kule ndlela zonxibelelwano kwaye ngale ndlela iimarike zezabelo ziya kuba zichola le meko ekumataniseni amaxabiso abo. Ngokuhla koqingqo-maxabiso lwawo kule minyaka idlulileyo kwaye lwandiselwa nakwezinye izikhuselo ezikweli candelo kwaye zineempawu ezifanayo.
Kule meko ngokubanzi, ithemba layo alilunganga kwaphela kwaye lisondele ekwehleni nangaphezulu kokunyuka kwixabiso lesabelo. Oku kuthetha ukuba unokuninzi ongakulahlekelwa kuko kunokuhlawula. Apho kunokwenzeka khona ukuba ungashiya i-euro eninzi apha endleleni ukusukela ngoku ukuya phambili ukuba uthatha isigqibo sokuvula izikhundla kweli xabiso likhethekileyo lezabelo zeSpanish. Imingcipheko ikhona kwaye akukho lula ukuba ungaziqwalaseli ukuze ungabinakho okunye ukumangaliswa okungalunganga kwezi zihlandlo zichanekileyo.
Kwelinye icala, kuya kufuneka ukhumbule ukuba umzuzu wobungangamsha bakhe kwimarike yemasheya ubonakala ngathi udlulile. Oku kuqatshelwa ngohlalutyo olucokisekileyo lokuvela kwayo kule minyaka idlulileyo. Ukongeza, iya kuba lelinye lamaxabiso achaphazeleke kakhulu kukudodobala koqoqosho kuzwelonke nakumazwe aphesheya. Kungenxa yokuba iya kuchaphazela ukwehla kwezentengiso ngowona mthombo uphambili wengeniso. Njengoko kwenzekile kutshanje nge ingxaki yezoqoqosho Oko kwaphuhliswa ukusukela ngo-2008 kwaye yayiyenye yexabiso elisohlwaywa kakhulu ziimarike zezemali. Ukuya kwinqanaba lokufana nexabiso elijikelezayo lokuziphatha.
Enye into ekufuneka ivavanyiwe kufundo lweli xabiso lelo libhekisa kukuxhomekeka ekusetyenzisweni. Kungenxa yokuba esi sizathu sesona sibangela ukuba kukho intengiso engaphezulu okanye encinci kwigrill yakho kamabonwakude. Ngokungabinayo eminye imithombo yengeniso Ngokubaluleka okukhethekileyo kwaye oko ngokungathandabuzekiyo linokulinganisa ixabiso kuluhlu lwayo kwimarike yemasheya. Awunakho ukuwudelela lo mbandela ubalulekileyo kuba unokukunika isimanga esinqabileyo ukusukela ngoku. Kwimeko jikelele, apho uxinzelelo lokuthengisa lomelele kunomthengi ngaphandle komdla onokuthi uvuse ngenxa yesahlulo esiphezulu esabiwe phakathi kwabanini zabelo.
Ngezi zizathu, uMlamli okwangoku ungathengisa ngaphezulu kokuthenga kwaye ukuba uza kuthatha isikhundla kungokuhamba ngokukhawuleza okukhulu apho unokwenza khona inzuzo kukunyuka okunokubakho okunokuphuma ukusukela ngoku. Uya kuhlala unokhetho olungcono lokufezekisa ezona njongo zakho zingxamisekileyo, ezingekhoyo ngaphandle kokuphela konyaka ngebhalansi efanelekileyo kwiphothifoliyo yakho yotyalo-mali. Okokuphela kosuku kuthetha ntoni ngalo mzuzu kwaye kungenjalo kuzo zonke iimeko kufezekiswa ngendlela eyonelisayo kwimidla yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukudityaniswa okunokwenzeka kweMediaset kunye nomzali wayo